Jirid Af: Tarjamid lagu waay!
Tarjamid lagu waay!
Raage waa nin aad u wanaag iyo xishood badan. Maalin baa ku dhacay madax-xanuun iyo xumad badan. Habeenkii oo dhan buu la seexan waayay dhidid jirkiisa oo dhan qooyay. Raage wuxuu joogay Toronto sannado iska yarba, Ingiriiskiisuna wuxuu ahaa biyo ku cab kaliya. Kadib markuu qaadtay shaah kulul xawaash leh subaxdii, wuxuu aaday qolka ina-adeerkiisa Dooli si uu u waydiisto inuu u qaado dhakhtarka. Dooli waa daboxume caajislaw ah; wuu diiday inuu soo kaco oo caawiyo ina-adeerkiisa, kadib markii uu soo calaanjistay labo marduuf qaad ah xalay. Edabdarada Dooli maysan ka raallisiin Raage, wuxuuna ku wacay intii macagacxun ah ka jirtay dunida. Wuxuu gaar-ahaan xoogga saaray wajigiisa fool xun iyo labadiisa ilig ka maqan. Kamadanbeeyskii, isagoo xanaaq iyo madaxwareer la jiraan buu go’aansaday inuu qaadto baska oo aado isbitaalka.
Kadib markuu soo gaaray isbitaalka, Raage wuxuu dawaali ku aaday qolka gurmadka. Qolku wuxuu la buuxdhaafsanaa dad badan hargab iyo sanboor qaba oo wada qaadtay kursiyada dhan. Muusan helin meel uu ku cuskan karay lafahiisa daalan. Wuxuu dabadeed istaagay gees isagoo gashan jaakaddiisa “waryaa” ee ka wayn. Habar duq ah oo dhinac fadhiday baa garadtay inuusan is diiwaan galin oo u sheegtay inuu aado miiska diiwaangalinta.
Markuu soo gaaray miiska diiwaangalinta, yarta cad ee diiwaangalisada baa waydiisay hadduu ahaa Soomaali. Wuxuuna isla markiina kula jawaabay cod daciifsan “haa”, si uu u tuso inuu dhab-ahaan jiranaa. “Alle, waanu kuu baahannahay” baa tiri diiwaangalisada, waxayna dagdag ku geeysay mid ee qolalka baaritaanka, meesha kalkaaliso iyo habar duq Soomaali ah (70 jir qiyaastii) ay ku sugayayn.
“Ma Soomaali baad tahay?” kalkaalisada baa waydiisay Raage. “Haa,” buu si kalsooni ugu jawaabay, xataa isagoo Ingiriiskiisu iska yahay meelkumar qura.
Kalkaalisada: “Ma igula caawin kartaa u tarjamaadda haweenaydan, tarjamaankeedii baanan soo xaadir naqon,” bay waydiisay.
Raage: “ok, ok” buu yiri labo jeer si uu u muujiyo kalsooni dheeraad ah!
Kalkaalisada: “Fadlan fariiso halkaas,” iyadoo farta ku fiiqaysa kursi agyiil habarta duqda. Deedto wuxuu isku cariiriyay kursiga yar isagoo gashan jaakaddiisa “waryaa” ee wayn. Dabadeed jilbahiisa buu saartay miiska oo hore ugu foorarsaday sidii isagoo dhunkanayo kalkaalisada.
Kalkaalisada: “Magacaa?” bay waydiisay Raage.
Raage: “Raage,” buu ku jawaabay isagoo u fiirinaya wajigeeda si fiiqan.
Kalkaalisada: “Ma waydiin kartaa haweenayda waxa inta keenay?”
Raage: “Eedo xaggee lagaa hayaa?” buu waydiiyay habartii.
Habarta duqda: “Eedo halkaas gumaarka ayaad mooddaa in mindi igaga taagan tahay,” habarta duqda baa tiraahda iyadoo farta ku fiiqaysa caloosha hoosteeda.
Kalkaalisada: “Maxay tiri?”
Raage: “She feels something like a knife is piercing in her lower abdomen.” buu ugu jawaabceliyay.
Kalkaalisada: “Ma waydiin kartaa inay farta ku fiiqdo meeshay ka dareensan tahay xanuunka ugu badan?”
Raage: “Eedo bal gacanta saar meesha lagaa hayo.”
Habarta duqda: “Eedo hore ayaan kuu tusay, waa halkaas gumaarka ka hooseeya.” Habarta duqda baa ku jawaabta iyadoo farta ku fiiqaysa hoosta caloosheeda.
Raage: “She feels pain down there,” buu yiraahdaa isagoo farta ku fiiqaya hoosta caloosheeda.
Kalkaalisada: “Ma waydiin kartaa markii ugu danbeeyay ay galmo yeeladtay ama hadduu ku dhacay ama laga daaweeyay C.G.,” bay waydiisay.
Raage: “Waa maxay C.G.?” buu waydiiyay.
Kalkaalisada: “Waxay u taagan tahay Cudurada Galmada,” bay ku jawaabtay. Muusan aamini karin inay rabto inay waydiiso habarta duqda su’aalahan aan macnaha ku jirin. Camankaak baa ku dhacay, wuxuu bilaabay inuu madaxa xoqxoqdo oo hoos u dulfiiriyo miiska.
Raage: “Ma ku celin kartaa su’aasha mar kale?” buu waydiiyay, si uu waqtiga ugu dheereeysto.
Kalkaalisada: “Ma fahantaa Ingiriiska?” bay u waydiisay si qatiyaan leh.
Raage: “Haa, laakiin ku soo celi su’aasha,” buu waydiiyay.
Kalkaalisada: “Goormay ahayd markii ugu danbeeyay ay galmo yeeladtay?” bay ku tiri cod xoogan. Raage aad buu u fahmay su’aasha, laakiin muusan doonayn inuu is caybiyo oo waydiiyo su’aal caynkaas ah habartii duqda.
Raage: “Eedo odaygaagii ma nool yahay?” buu waydiiyay habartii, isagoo wali iska ilaalinaya erayga “Galmo.”
Habarta Duqda: “Alle ha u naxariisto eedo toban sanno ka hor ayuu xijaabtay,” ayay ugu jawaabtay. Deedto buu u jeestay kalkaalisadii oo ku dhahay “Ma u maleeynayo.”
Kalkaalisada: “Maxaad sheegaysaa?”
Raage: “Ma u maleeynayo inay galmo yeeladtay,” buu ku jawaabay.
Kalkaalisada: “Laakiin ma waydiisay hadday galmo yeeladtay ama ay yeelan” bay waydiisay.
Raage: “Saygeeda wuu dhintay, galmo maashee” buu ku jawaabay. Iyadoo ku dhibtoodtay jawaab la’aantiisa bay ku qaylisay oo dhahday: “Mudane, ma i xiisogaliso hadduu saygeeda dhintay ama noolyahay, waxaan kaa rabaa oo qura inaad waydiiso su’aalaha aan waydiinayo.” Markuu gartay kamadanbeeysnimada xaaladda, Raage wuxuu u jeestay xagga habarta duqda, wuxuuna go’aan ka gaaray inuu waydiiyo su’aasha. Intay ka qatiyaan naqodtay sida waxa u dhacayo, habartii baa u soo jeesadtay Raage oo waydiisay “Eedo haddii aadan Ingiriisiga garanayn qof kale ayaan sugayaayee, ha is cadibin.”
Raage: “Maya Maya eedo sidaas maaho, wax aanan fahmin ayay ka hadlaysaa,” ayuu ugu jawaabay.
Habarta duqda: “Haa waan kuu sheegay, Ingiriisiga ayaa kugu adag, ma qolyaha hadda soo galay ayaad tahay” ayay ku tiri.
Kalkaalisada: “Ma haysto waqti, maxay leedahay?” bay waydiisay Raage.
Raage: “Fadlan sug,” buu dhahay isagoo u taagay gacantiisa kalkaalisada.
Habarta duqda: “Maxay ku waydiisay?”
Raage: “Eedo waxay rabtaa inay ogaadto markii kuugu danbeeysay ee aad nin meel la seexadtay” buu ku yiri si dhiban.
Habarta duqda: “Maxay ka rabtaa? Habeen kasta ayaan nin meel la seexdaayee” ayay ku jawaabtay. Wajigiisa oo ka muuqdo fajac iyo aamindaro, buu u jeestay kalkaalisada oo yiri: “She sleeps with a guy in every night.”
Kalkaalisada: “Ma ku waydiin hadday la seexadto nimanka ama aysan la seexan, qura waxaan rabaa inaan ogaado markii ugu danbeeyay ay galmo yeeladtay” bay ku adkeeysadtay. Wajigiisa oo ka sii muuqda dhib iyo cabsi buu u jeestay habartii oo waydiiyay: “Eedo adiga iyo ninka kula dagan goorma ayaa ugu danbeeysay oo aad wax wada sameeysayn?”
Habarta duqda: “Maxaad ka waddaa wax wada sameeysayn?” bay waydiisay (wajigeeda oo ka muuqda layaab iyo wareer).
Raage: “Saw ma aad dhahin nin baan la daganahay?”
Habarta duqda: “Oo miyaad i waydiisay ninka aan la daganahay waxa uu yahay iyo waxa aanu isku nahay?” bay waydiisay.
Raage: “Maya, laakiin waxa aan u fahmay nin wax kale idinka dhaxeeyaan,” buu ku jawaabay. Wajigeeda oo ka buuxa xanaaq iyo xumeeysnaan, bay ku tiri: “War sharmuudyahaw wiilka ila dagan ayeeyo ayaan u ahay.” Iyadoo gaaraysa kabteeda midig, bay waydiisay: “War naagta ma waxaad ku tiri niman baa ila seexda?” intuusan dhahinna waxna bay wajiga kaga dhufadtay kabteeda gabawga ah ay kala timid Soomaaliya! Xaax!, xanuun badnaa, dhabtii!. Madax-xanuunkiisa iyo dawakhiisa buu la arki waayay albaabka, wuxuuna ku cararay dhinaca kale ee qolka meesha kalkaalisada fadhiday. Madax-xanuunkiisa iyo hargabkiisa buu la aaday guriga, isagoonan arkin dhakhtar. Waxay ahayd xaalad ah “Tarjamid lagu waay”.
Sheekada: Gaaban (Qosalqosal)
Qoreha: Faarax Maxamuud Maxammad
Cinwaanka asalka: Lost in Translation (ku qoran: IngilishSoomaal).
Daabacay Samantar Maxammad Saciid saacadda 15:01
Tilmaamo: Codadka Anglosaksonka, Shaacirooyin, sheekooyin Tarjuman, Soomaalida (af shisheeye tarjuman)
Barigaan is baranay
Sida koorta yucub